Madaxda ugu sarreysa KENYA oo isku khilaafay kiiska badda Soomaaliya - Caasimada Online
Home Badda Madaxda ugu sarreysa KENYA oo isku khilaafay kiiska badda Soomaaliya
Madaxda ugu sarreysa KENYA oo isku khilaafay kiiska badda Soomaaliya
Nairobi (Caasimada Online) – Sida uu daabacay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, ayaa si aad ah uga xumaaday hanaanka Wasiirkiisa Arrimaha dibadda Kenya ay u wajahday Dacwadda Badda ee Somaliya iyo Kenya.
Waa midda koowaad inay ku guuleysan wayday arrinta Badda ee Somaliya kala dhaxeysa, islamarkaana ay magacowday Diblumaasiyiin aan xirfad badneyn oo Kenyan ah, sidoo kalena Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya ay iska gaartay go,aano shaqsi ah.
Kenya ayaa sanadkaan waxaa soo gaaray guul darooyin waaweyn oo ay kala kulantay caalamka, taasi oo fadeexo ku noqonaysa marka laga hadlaayo fagaarayaasha Caalamka.
Arrinta Badda Somaliya oo Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo 12-bilood ayaa laga diiday, waxaana maxkamadda Hague ay u ogolaatay Kenya in laba bilood kaliya kiiska badda dib loo dhigo.
Kenya ayaanan kalsooni badan ku qabin kiiska badda Somaliya & Kenya waana arrinta keentay walaaca Kenya ay muujinayso.
Waxyaabaha ugu culus ee lagu heysto waxaa ka mid ah in siyaasadda arrimaha dibadda Kenya haadaan ka ridday islamarkaana Kenya u nugushay in labo jeer ay fagaarayaal Caalami ah ku guul darreysto sanadka soo socda.
Arrintan ayaa la sheegay in aysan faxad gelinin Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo labada qof u arka kuwa ku ciyaaray doorkii diblomaasiyadeed ee Kenya ku lahayd Caalamka.